·7months ago ·42 Comments
မနက်ဖြန် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၇၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ John Lennon ရဲ့ Imagine သီချင်းလေးကို Cover Song ပြန်လည်သီဆိုထားတာလေးကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 14K Share – 2549
Zin Maw Lay says:
2021-06-18 at 7:55 PM
Thae Wai Hlaing says:
2021-06-18 at 7:57 PM
ကိုယ်တွေရဲ့ Collective Art လေးထည့်သုံးထားလို့ ကြည်နူးမိ 🥰
Gabriel Thway says:
2021-06-18 at 7:59 PM
2021-06-18 at 8:00 PM
HAPPY BIRTHDAY. ..many happy returns of the day to
you with love.
2021-06-18 at 8:08 PM
ကျွန်မ အာဏာလိုချင်ပါသည် ကျမ မသေခင်ပြည်သူတွေကိုပေးခဲ့ချင်လို့
2021-06-18 at 8:09 PM
Happy birthday mother Su Kyi
Bunyan Panta says:
2021-06-18 at 8:16 PM
အေမစု အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ အေမစု အျမဆံုးလြတ္ေျမာက္ပါေစ
Nan Linn says:
2021-06-18 at 8:23 PM
အမေစု အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ကျန်းမာပါစေ 🥰
Lily Lya Lyan says:
2021-06-18 at 8:37 PM
အမေစု အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ🌹🌿♥🌿🌹🍀♥🌿🌹🍀♥🌿🌹🍀♥🌿🌹🍀♥
Khine Myae says:
2021-06-18 at 8:42 PM
Ma Ma Khaing says:
Myint Thaung says:
2021-06-18 at 9:05 PM
အမေ ကျန်းမာ စိတ်အေးချမ်းပါစေ
2021-06-18 at 9:08 PM
2021-06-18 at 9:09 PM
Tin A A A says:
2021-06-18 at 9:15 PM
Than Dar Moe says:
2021-06-18 at 9:27 PM
Min Ma Ma May says:
2021-06-18 at 9:32 PM
Thazin Aung says:
အမေစု အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ ။
Marmar Win says:
အမေ အသက်ရှည်ကျန်းမာပြီး ဘေးရန်ကင်းပါစေ။ချစ်တယ်အမေ။
Htet Htet Naing says:
Do Nuam Huai says:
2021-06-18 at 10:00 PM
Happybirthday. Maysu အသက်ရှည်ပါစေ 🎂
2021-06-18 at 10:03 PM
အမေစု အသက်ရှည်ကျန်းမာ ဘေးရန်ကင်း၍ စိတ်အေး ချမ်းသာစွာဖြစ် မြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ အမေ
Hanlynn Swe says:
2021-06-18 at 10:17 PM
We promise you Victory!
MayZon Moe says:
2021-06-18 at 10:24 PM
အေမ ေဘးရန္ကင္းရွင္းၿပီး အသက္ရွည္က်န္းမာပါေစ။
2021-06-18 at 10:29 PM
2021-06-18 at 10:39 PM
2021-06-18 at 10:44 PM
2021-06-18 at 10:55 PM
PaRa Kyaw says:
မေမေ့ရဲ့ ၇၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်လေး မှာ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးကြတဲ့ ပြည်သူအများစုက အမှတ်တရဖြစ်ဖို့ ၊ မှတ်မှတ်ရရတွေ ပြုလုပ်နေကြပြီ မေမေ။
မေမေ လွတ်လပ်ငြိမ်ချမ်းစွာ ပြန်လည်နေနိုင်ဖို့နဲ့ မေမေ ဖြစ်စေခြင်တဲ့ ဥပဒေအထက်ဘယ်သူမှမရှိသောနိုင်ငံ ဖြစ်ဖို့ ပြည်သူတွေအားလုံး စိတ်တူကိုယ်တူ ရုံးကန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီ မေမေ။
ဒီတစ်ခါ အားအရှိဆုံးက တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ သူအများအပြားက အမှန်တရားဘက်ကနေ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ကြပြီး အာဏာရူး အတ္တသမားတွေကို ပေါ်လွင်ထင်ရှား သိမ်ငယ်ပြီး မျိုးဆက်လ်ုက်လူတောမတိုးရဲအောင်လုပ်ထားနိုင်ကြပြီ မေမေ။
ဖြစ်နိုင်ရင် အရေးတော်ပုံအောင်ပွဲကြီးကို မေမေ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် လုပ်ပြလိုက်ခြင်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ မကြာတော့ပါဘူး မေမေဆီက
“ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေကတော်လ်ုက်တာ ဆက်ပြီးလိမ္မာရမယ်နော်” ဆိုတဲ့အသံလေးကြားရတော့မှာပါ။ အဓမ္မ ကို ဓမ္မ ကသာ နိုင်မြဲပါ။
အရေးတော်ပုံ မုချ အောင်နိိုင်တော့မည်။
( ပြည်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်သည်ဆိုတာထက် သူမ၏ ကိုယ်ကျင့် သီလ ၊သမာဓိ ၊ သိက္ခာ ၊ စေတနာ ၊မေတ္တာ နဲ့ ဥာဏ်ပညာတွေ ကို ယုံကြည်၊ လေးစား၊ ကြည်ညိုကြတာ၊ အဲတာကို ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ပြောရင်လဲ စွဲသင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မို့ စွဲကြတယ်ဆိုတာ သူယုတ်မာ ဖွတ်တသိုက် သိကြပါစေ။)
Shar Soe says:
2021-06-19 at 1:42 AM
Chaw Moth Theingi Swe says:
2021-06-19 at 2:09 AM
Happy birthday ပါ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်အမေ 🙏 ကျန်းမာပါစေ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ.. အချုပ်အနှောင်မှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ
Nan Anna Morrow says:
2021-06-19 at 2:36 AM
မေမေမအိုပါဘူး အမေ့ရဲ့မေတ္တာတွေအမြဲနုပျိုနေလို့ပါ❤ 19.6.2021 #အမေ့ရဲ့မွေးနေ့ကစပြီး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ရရှိပြည့်စုံပါစေ မေမေ🙏🙏🙏 #CrdPhoto.
2021-06-19 at 3:44 AM
Thiri Naing says:
2021-06-19 at 7:58 AM
2021-06-19 at 8:02 AM
နှင်းဆီစံအိမ် သခင်မ . . . သို့
အနှောင်အဖွဲ့ နှင့် အကြွေးဟောင်းဟူသမျှ အကြွင်းအကျန် မရှိ အကုန်ပေးဆပ်နိုင်သဖြင့်
ယခုဘဝမှစနောင်သံသရာမှာ လွတ်မြောက်ရာ အငြိမ်းဓါတ် အအေးဓါတ် တရားထူးတရားမြတ်များ ရပါစေ
တရားဓမ္မ၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ၍ ဘေးအမျိုးမျိုးမှ လွတ်မြောက်ပါစေ
Thar Pauk says:
2021-06-19 at 8:23 AM
အမေစုရဲ့ ယနေ့ကျရောက်တဲ့ အသက်၇၆နှစ် မွေးနေ့မှစ၍၊ မကောင်းသော အန္တရယ်အလုံးစုံတို့သည် ကင်းစင်လွင့်ပျောက်ကြပါစေ၊ မကောင်းသော နိမိတ်၊ မကောင်းသော အတိတ်၊ မကောင်းသော ဘေးဥပဒ်၊ မကောင်းသောဂြိုဟ်စီးဒသာ ကြမ္မာတို့ ကင်းလွတ်ပါစေ🙏🙏🙏
2021-06-19 at 10:44 AM
Happy birthdayအမေစု။ အမေ ဘေးရန်ကင်း၍ ကျန်းမာအသက်ရှည်ပါစေ။
Moe Moe Aung says:
2021-06-19 at 11:41 AM
အ​မေစုကျမ္မာသက်ရှည်အနာ​ရောဂါကင်းပီး အ​နှောင်အဖွဲ့ မှအမြန်လွတ်ပါ​စေ
2021-06-19 at 3:02 PM
Mya Kyarni says:
2021-06-19 at 9:37 PM
2021-06-20 at 11:41 AM
John Lennon တော့ချမ်းသာပေးပါ ဗားမားက တခြား တောသီချင်းလေးတွေလုပ်ပါ 😌😌
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ မနက်ဖြန် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (…